ကျွန်မတို့ အခု ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များဟာ တက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ တပြည်လုံးကစီမံကိန်းကို ကူညီဖို့ ပံ့ပိုးပေးဖို့ တက်ရောက်လာတယ်လို့ ကျွန်မ ဒီလိုပဲ နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဘယ်လိုနည်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ကိုယ့်အချင်းချင်း စည်းစည်းလုံးလုံး လုပ်မှ အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ .ယုံကြည်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းအင်အားထက် ယှဉ်နိုင်တဲ့ ပြည်ပအင်အားဆိုတာ ဘာမှ မရှိဘူးလိုလည်း ကျွန်မကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခု ဒီစီမံကိန်းမှာ အားလုံးက ၀ိုင်းပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်တာဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက် အင်အားပဲ။ အချို့ကလည်း ဒီဟာကို တော်တော်အံ့အားသင့်တယ် ကျွန်မတို့ တွေ့ရပါတယ်. အဲတော့ ဒီအံ့အားသင့် တာကို ကျွန်မတို့ကတော့ ဒီလောက် အံ့အားမသင့်ပါဘူး ကျွန်မတို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ ပြည်ထောင်စု အကျိုးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးချင်တဲ့ စိတ် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာအစတည်းက ဒီလိုလက်ခံလာခဲ့တာပါ။
အခုဒီတွေ့ဆုံတာကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့တယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ဒီအခမ်းအနားမစခင်မှာ ညွှန်ကြားထားတာလေးလည်း ရှိတယ်လို့ ကျွန်မ နားလည်ပါတယ်။ အဲဒီ ညွှန်ကြားထားတာတွေကလည်း ကျွန်မက အင်မတန်မှ စိတ်လည်းဝင်စားတယ်၊ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ရှေ့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမယ့် အကြံပြုချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလည်း အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပြုချက်ပါ. ဒီအသေးစိတ်ကတော့ ကျွန်မတို့ အားလုံး ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ အစီအစဉ် ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ နိုင်ငံတကာမှာ တိုးတက်မှုပြဖို့ လိုမယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တိုးတက်မှုပြဖို့လိုတယ်ဆိုတာ စိတ်တက်ကြွအောင်လည်း လုပ်စေချင်တယ်. သိပ်ပြီးတော့ မအေးသွားအောင်လုပ်တာမျိုး၊ အဲဒါက တစ်ခုပေါ့နော်။
နောက်တစ်ခုကလည်း ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ ကိစ္စကို ကျွန်မတို့အားလုံးက လုပ်နိုင်ရဲ့လားဆိုပြီး ကြည့်ပြီးတော့ လေ့လာနေတာတွေလည်း ရှိတယ်။အဲဒါလည်း ကျွန်မတို့ပြရမယ်။ ကျွန်မတို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ။ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ ဟာ သူများတွေထက် ချမ်းသာတဲ့ တခြားအင်အားရှိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ပြရမယ်။ အဲတော့ အဓိကအင်အားကတော့ ကျွန်မတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မတို့ စီစဉ်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်မတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အကြံပြုချက်တွေ ပေးစေချင် ပါတယ်။ အကြံပြုချက်အားလုံးဆိုတာကတော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရချင်မှရမယ်။ ဒါပေမယ့် အသင့်တော်ဆုံးတွေကို ရွေးပြီးတော့ လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်မတို့ဟာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာကို အားလုံးစုပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတွေလို့ ဆိုရာမှာ ရေတိုမှာလည်း အသီးအပွင့်တွေကို မြင်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်း ကျမတို့ ရွေးရမယ်။ တချို့ကတော့ ဆက်ပြီးတော့ ရေရှည်သွားရဖို့လိုသလို အခုတည်းကစပြီးတော့ လုပ်ရမယ့် အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါတယ်။ဒါကို ကျမတို့က လူမှုရေးဘက်ကရော၊ စီးပွားရေးဘက်ကရော၊ နိုင်ငံရေး ဘက်ကပါ သုံးဘက်စလုံး မြင်အောင် ကျမတို့ လေ့လာရမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဆိုတာဟာ ပျက်စီးသွားတဲ့ရွာတွေ၊ မီးပြာကျသွားတဲ့ရွာတွေကို ကျွန်မတို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဆိုတဲ့ အခါမှာ ဒီဟာက လူမှုရေးအရ လိုအပ်တာလည်း ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေးအရလည်း လိုအပ်တာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်မတို့က ဒီလိုဖြေရှင်းမှု တွေကို အားပေးတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါတွေကိုလည်း ကျွန်မကပြောတယ်။ မကြိုက်ဘူး။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ရှိလို့ရှိရင် ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကျွန်မတို့ကနေ တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အရလည်း ပြန်လည်ပြီးတော့ ပြုပြင်ထူထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးကတော့ ရှင်းပြစရာ မလိုတော့ဘူး ပေါ့နော်။
နောက်စီးပွားရေးအရ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိတယ်။ကိုယ်ရပ်ရွာမှာပဲ ပုံမှန်အလုပ်တွေပြန်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှပဲ ပိုပြီး တော့ ကျွန်မတို့ စီးပွားရေးယန္တရားဆိုတာ ပြန်ပြီးတော့ လည်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေး ယန္တရားလည်တယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်မတို့ ဒီယန္တရား အဟောင်းကြီးကိုပဲ ပြန်ပြီးတော့ လည်ပတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယန္တရား အသစ်တွေ ကိုပဲ ကျွန်မတို့ ပုံဖော်သွားရပါမယ်။ အဲတော့ ဒီနေရမှာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တွေက အတွေးအခေါ်သစ်တွေနဲ့ ကျမတို့ကို ကူညီနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာတွေက လုံလောက်တယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အခုလက်ရှိ ဒီအခြေအနေမှာ ရှိမနေပါဘူး။ အရင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တာတွေက မလုံလောက်လို့ အခု ဒီအခြေအနေမှာ ရှိနေတာ။ နောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ အနာဂတ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးမလဲဆိုတာကို အားလုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ ဝိုင်းပြီးတော့ ဆွေးနွေးစေ ချင်တယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒေသတွေ သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဘယ်ဒေသကို ဘယ်လုပ်ငန်းရှင်က တာဝန်ယူမလဲဆိုတာ အဲလိုနည်းနဲ့ ဆွေးနွေးထားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုလေး တွေကို ကျမတို့ အားပေးချင်တယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် မနာလိုလို့ သဝန်တိုလို့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ တယောက် ကနေတယောက်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကောင်းတဲ့မာနလေးတွေကို ကောင်းတဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက် ပြိုင်ဆိုင်တာဟာ ဒါဟာ အဆိုးမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ မြင်ပါတယ်။ ဘာလိုလည်းဆိုတော့ တခါတလေလည်း သင်ယူလို့ ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဟိုဘက်ကဒေသက ပိုပြီးတော့ များများစားစား အောင်မြင် နေလည်း၊ ဒီဘက်က ဘာလိုလည်းဆိုတာလိုပေါ့။ အဲတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ ဒေသအတွက်တင်မဟုတ်ဘူး၊ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် လည်း အများကြီး ရေရှည်မှာ အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သင်ယူတဲ့ သဘောမျိုးကို ပြောတာပါ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အောင်မြင်တဲ့သူ၊ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တဲ့သူဟာ ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နိုင်လည်း၊ ဘာလို့အောင်မြင် လည်း၊ ဘာလို့ထိရောက်လည်း၊ အဲဒီဟာ အားလုံးအတွက် တိုးတက်မှုရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်လို့ Enterprise လို့ သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Enterprise ဆိုတာ ကြိုးပမ်းမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်မယ့် စီမံကိန်းဆိုတာ ကျွန်မတို့ ဒီလိုဖြစ်စေ ချင်တာပါ။
ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံက ကျမတို့ ဒီလောက်မလိုပါဘူး။ ပိုက်ဆံက အရေးကြီးတယ် ဆိုပေမယ့် အဓိကက ကျွမ်းကျင်မှု လိုပါတယ်။ ပိုက်ဆံကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မသုံးနိုင်ရင် အဟောသိကံ ဖြစ်သွားမှာပါ။အဲတော့ ကျွန်မတို့က ကျွမ်းကျင်မှုတွေ လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်နိုင်မယ့် အရာတွေကို တွက်ချက် နိုင်မယ့် အရည်အချင်းတွေ လိုပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေုးလုပ်ငန်း ရှင်တွေဆိုတာ တကယ်တော့ အရိုးသားဆုံးပြောမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ဈေးကွက်ကို နားလည်တယ်။ အနာဂတ်ဈေးကွက်မှာ ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာကို တွက်ချက်နိုင်သူများ ဖြစ်တယ်။ ဒီတနှစ်အတွက်ပဲ တွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်မျိုး မရှိဘူး။ အနာဂတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တွက်ချက်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကျမတို့ နိုင်ငံမှာ ရှိတယ်။ နောင်အတွက် ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ချရမယ့် ကျွန်မတို့ဟာ ပထဦးဆုံးစမ်းသပ်တဲ့ စီမံကိန်းလို့လည်း ယူဆလို့ ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဟာ ပြည်ထောင်စုကြီးကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ အများကြီးရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို တွဲပြီးတော့ ကျွန်မတို့ အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်။
ရခိုင်ဟာဆိုရင် အခုချိန်မှာတော့ အခက်ခဲဆုံးနေရာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်. အခက်အခဲဆုံးတွေကတော့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုတွေက အင်မတန်မှ များတယ်။ များလို့လည်း လုပ်ရကိုင်ရတာ ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။သိုသော်ငြားလည်း များပေမယ့် ကျွန်မတို့ဟာ အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်လို့ ရှိရင် ၀ိုင်းပြီးပံ့ပိုးမယ့် အင်အားတွေလည်း တိုးချင်တိုးလာနိုင်တာ ရှိပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှု ဆိုတာလည်း အခွင့်အရေးပဲ။ များလို့လည်း ပိုပြီး အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်လို့ရင် ပံ့ပိုးမှုရနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အဲတော့ ကျမတို့ကပြောမယ်ဆို၇င် အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေး အရထက် ပစ္စည်းဥစ္စာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာ အကြံဥာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်ပိုင်းရော နှလုံးသားပိုင်းရော ၂ ခုစလုံးကို ကျမတို့ ပြောရပါမယ်။ စေတနာနဲ့ လုပ်တဲ့ဟာ ကို ပြောတာဖြစ်တယ်။ ညဏ်ပညာနဲ့ နောင် အနာဂတ်ကို မှန်းဆနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ လုပ်တာလည်း ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ဆိုလိုရှိရင် ပြည်သူ၊ အစိုးရနဲ့ ချမ်းသားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားမှာဆျိုရင် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုက ရှိသင့်သလောက် မရှိခဲ့ဘူး။တချို့ကဆိုရင် ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူအနေနဲ့ ရာထူးလုပ်နေ တာလည်း ရှိတယ်။ တချို့ကဆိုရင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိတဲ့အနေနဲ့ ရာထူးလုပ်နေတာလည်း ရှိတယ်။ တချို့ကဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူကို တောင်းခံပြီး ရာထူးလုပ်နေတာလည်းရှိတယ်။ အဲတော့ကျမတို့ လုပ်ငန်းရှင် ကြီးတွေ ဆိုတာလည်း နိုင်ငံ့အတွက် အင်အားပဲ။ အစိုးရ ဆိုတာလည်း နိုင်ငံ့အတွက် အင်အားပဲ။ ပြည်သူဆိုတာလည်း နိုင်ငံ့အတွက် အင်အားပဲ။အဲတော့ ဒီအင်အား ၃ ခုကို ကျမတို့ စုစည်းပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ပြည်ထောင်စု စီမံကိန်းကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မတို့ အနာဂတ်ကို တကယ့်ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ် ဒီနေ့ ချလိုက်တယ်လို့ပဲ ယူဆလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီလိုပဲ ယူဆတယ်လို့ ပြောရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း(UEHRD) အတွက် အလှူငွေ ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင့်် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသည့်စကား
၃၀.၁၀.၂၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် ဒီလှိုင်းစာစောင်